ဆင်းရဲဒုက္ခ ဘာကြောင့် ဒီလောက်များရတာလဲ — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
bhs အခန်း ၁၁ စာ. ၁၁၆-၁၂၃
ဆင်းရဲဒုက္ခ ဘာကြောင့် ဒီလောက်များရတာလဲ
ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​များ​ရ​တာ​လဲ
ဘု​ရား​သခင် ဘာ​ကြောင့် ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ဖြစ်​ခွင့်​ပြု
ယေဟောဝါ ဘာ​လို့ ဒီ​လောက်​ကြာ​ကြာ စောင့်​ဆိုင်း​ရ​တာ​လဲ
လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့် ဆု​လက်​ဆောင်​ကို သင် ဘယ်​လို​သုံး​မလဲ
ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲသမ္မာကျမ်းစာ အမှန်တကယ် သွန်သင်ရာက ဘာလဲ
လူသားတွေအတွက် ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဘာလဲသမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ရာများ
ဆင်းရဲခက်ခဲမှုကို ဘုရားသခင် အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုတော်မူသနည်းနိုးလော့!—၂၀၀၆
၁၊ ၂။ ဘယ်​မေး​ခွန်း​ကို လူ​အများ မေး​တတ်​ကြ​သလဲ။
ဆူ​နာ​မီ​ကြောင့် တစ်​ရွာ​လုံး ပျက်​စီး​သွား​တယ်။ လူ​တစ်​ယောက်​ ဘု​ရား​ကျောင်း​ထဲ ဝင်​လာ​ပြီး သေနတ်​နဲ့​ပစ်​တဲ့​အတွက် ဒဏ်​ရာရ​သူ​တွေ၊ သေဆုံး​သူ​တွေ အများ​ကြီး​ပဲ။ ကင်​ဆာ​ရော​ဂါ​ကြောင့် မိ​ခင် သေဆုံး​သွား​လို့ က​လေး​ငါး​ယောက် ကျန်​ရစ်ခဲ့​တယ်။
၂ အဲဒီ​လို​ကပ်​ဘေး​တွေ၊ အဖြစ်​ဆိုး​တွေ ကြုံရ​တဲ့​အခါ “ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လို​ဖြစ်​ရ​တာ​လဲ” ဆို​ပြီး လူ​အများ မေး​တတ်​ကြ​တယ်။ လော​က​ကြီး​မှာ အမုန်း​တ​ရားတွေ၊ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​များ​ရ​တာ​လဲ​လို့ လူ​အများ မေး​တတ်​ကြ​တယ်။ သင်​ကော အဲဒီ​လို မေး​ဖူး​သလား။
၃၊ ၄။ (က)ဘယ်​မေး​ခွန်း​တွေ​ကို ဟ​ဗက္ကုတ် မေး​ခဲ့​သလဲ။ (ခ) ယေဟောဝါ ဘယ်​လို အဖြေပေး​သလဲ။
၃ ဘု​ရား​သခင်​ကို အပြည့်​အဝ ယုံ​ကြည်​သူ​တွေ​လည်း အဲဒီ​လို​မေး​ခဲ့​ဖူး​တာ​ကို ကျမ်း​စာ​က​နေ သိ​ရ​တယ်။ ဥပမာ၊ ပရော​ဖက်​ဟ​ဗက္ကုတ်​က “ကျွန်​တော့်​ကို မကောင်း​မှု​တွေ ဘာ​လို့​မြင်​စေ​တာ​လဲ။ ဖိ​နှိပ်​သူ​တွေ​ကို ကိုယ်​တော် ဘာ​လို့ သည်း​ခံ​နေ​တာ​လဲ။ အကြမ်း​ဖက်​မှု​တွေ၊ ဖျက်​ဆီး​မှု​တွေ ကျွန်​တော့်​ရှေ့​မှာ ဘာ​လို့​ဖြစ်​နေ​တာ​လဲ။ ငြင်း​ခုံ​ရန်​ဖြစ်​တာ​တွေ ဘာ​လို့ ဒီ​လောက်​များ​နေ​တာ​လဲ” ဆို​ပြီး ယေဟောဝါ​ကို မေး​ဖူး​တယ်။—ဟ​ဗက္ကုတ် ၁:၃။
၄ အဲဒီ​မေး​ခွန်း​တွေရဲ့ အဖြေ၊ အရေး​ယူ​လုပ်​ဆောင်​ပေး​မယ်​ဆို​တဲ့ ဘု​ရားရဲ့​ကတိ​ကို ဟ​ဗက္ကုတ် ၂:၂၊ ၃ မှာ ဖတ်​ရ​တယ်။ ယေဟောဝါ​ဟာ လူ​တွေ​ကို သိပ်​ချစ်​တယ်။ ‘ဘု​ရား​သခင်​ဟာ ခင်​ဗျား​တို့​ကို ဂရု​စိုက်​တဲ့​အရှင် ဖြစ်​တယ်’ လို့ ကျမ်း​စာ​က ပြော​တယ်။ (၁ ပေတရု ၅:၇) တ​ကယ်​တော့ ဘု​ရား​သခင်​က ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ​ကို ကျွန်​တော်​တို့​ထက်​တောင် ပို​မုန်း​တယ်။ (ဟေ​ရှာ​ယ ၅၅:၈၊ ၉) ဒါ​ဆို​ရင် ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​များ​ရ​တာ​လဲ​ဆို​တဲ့ မေး​ခွန်း​ကို သုံးသပ်​ကြည့်​ရ​အောင်။
၅။ လူ​တွေ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခရောက်​တဲ့​အခါ ဘာ​သာ​ရေး​ဆ​ရာ​အများ​စု ဘယ်​လို​ပြော​တတ်​ကြ​သလဲ။ ကျမ်း​စာ​က ဘယ်​လို​သင်​ပေး​သလဲ။
၅ လူ​တွေ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခရောက်​တဲ့​အခါ အရင်​ဘဝ​က မကောင်း​တာ​လုပ်​ခဲ့လို့​ဆို​ပြီး တ​ချို့​ပြော​ကြ​တယ်။ လူ​တွေ ဒုက္ခရောက်ရ​တာ​ဟာ ဘု​ရား​အလို​တော်​ပဲ​လို့ ဓမ္မ​ဆ​ရာ၊ ဘုန်း​ကြီး​နဲ့ ဘာ​သာ​ရေး​ဆ​ရာတွေ ပြော​တတ်​ကြ​တယ်။ အဖြစ်​ဆိုး​တွေ​အပါ​အဝင် ဘာ​ပဲ​ကြုံရ​ပါ​စေ ဘု​ရား​သခင် ကြို​တင်​သတ်​မှတ်​ပြီး​သား​ပဲ၊ ဒါ​ကို လူ​တွေ နား​မလည်​နိုင်​ဘူး​လို့ တ​ချို့​ပြော​တတ်​ကြ​တယ်။ ဘု​ရား​သခင်​က ကောင်း​ကင်​မှာ သူ​နဲ့​အတူ​နေ​ဖို့ က​လေး​တွေ​အပါ​အဝင် လူ​တွေ​ကို သေစေ​တယ်​လို့​တောင် ပြော​ကြ​တယ်။ တ​ကယ်​တော့ အဲ​ဒါ မမှန်​ဘူး။ မကောင်း​မှု​တွေ​ဖြစ်​အောင် ယေဟောဝါ ဘယ်​တော့​မှ မလုပ်​ဘူး။ “စစ်​မှန်​တဲ့​ဘု​ရား​သခင်​က ဆိုး​ညစ်​တာ​ကို ဘယ်​တော့​မှ မလုပ်​ဘူး။ အနန္တ​တန်ခိုး​ရှင်​က မကောင်း​တာ​ကို လုံး​ဝ​မလုပ်​ဘူး” လို့ ကျမ်း​စာ​ပြော​တယ်။—ယောဘ ၃၄:၁၀။
၆။ ကမ္ဘာ​ပေါ်​က ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​မှန်​သမျှ ဘု​ရား​သခင်​ကြောင့်​လို့ လူ​တွေ ဘာ​လို့​အပြစ်​တင်​ကြ​တာ​လဲ။
၆ ကမ္ဘာ​ကို ဘု​ရား​သခင် အုပ်​စိုး​နေ​တယ်​လို့ လူ​တွေ ယူ​ဆ​တဲ့​အတွက် ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​မှန်​သမျှ ဘု​ရား​သခင်​ကြောင့်​လို့ အပြစ်​တင်​ကြ​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ကမ္ဘာ​ကို တ​ကယ်​အုပ်​စိုး​နေ​သူ​ဟာ စာ​တန်​မာ​ရ်​နတ်​ဖြစ်​တယ်​ဆို​တာ အခန်း ၃မှာ သိ​ခဲ့ရ​တယ်။
၇၊ ၈။ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​များ​ရ​တာ​လဲ။
၇ ‘တစ်​လော​က​လုံး​က​တော့ ဆိုး​ညစ်​သူ​ရဲ့ သြဇာ​အောက်​မှာ ရှိ​နေ​တယ်’ လို့ ကျမ်း​စာ​ပြော​တယ်။ (၁ ယောဟန် ၅:၁၉) ဒီ​လော​က​ရဲ့​အုပ်​စိုး​ရှင် စာ​တန်​ဟာ ရက်​စက်​ကြမ်း​ကြုတ်​တယ်။ သူ​ဟာ “လူ​နေ​ထိုင်​ရာ မြေတစ်​ပြင်​လုံး​ကို လှည့်​စား” နေ​တယ်။ (ဗျာဒိတ် ၁၂:၉) လူ​အများ​က သူ့​လို လိုက်​လုပ်​ကြ​တယ်။ ဒါ​ဟာ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ အလိမ်​အညာ၊ အမုန်း​တ​ရား​နဲ့ ရက်​စက်​ကြမ်း​ကြုတ်​မှု​တွေ ပြည့်​နေ​ရ​တဲ့ အကြောင်း​ရင်း​တစ်​ခု​ပဲ။
၈ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​ပြည့်​နေ​ရ​တဲ့ တ​ခြား​အကြောင်း​ရင်းတွေ ရှိ​သေး​တယ်။ အာ​ဒံ​နဲ့​ဧ​ဝ ပုန်​ကန်​ပြီး​တဲ့​နောက် သား​သမီး​တွေ​ဆီ အပြစ်​ကို လက်​ဆင့်​ကမ်း​ပေး​ခဲ့​တယ်။ အပြစ်​သား​ဖြစ်​တဲ့ လူ​တွေ​ဟာ သူ​တစ်ပါး ဒုက္ခရောက်​အောင် လုပ်​ကြ​တယ်။ သူ​များ​ထက် သာ​ချင်​ကြ​တယ်။ ခိုက်​ရန်​ဖြစ်​ကြ၊ စစ်​တိုက်​ကြ၊ အနိုင်​ကျင့်​ကြ​တယ်။ (ဒေ​သနာ ၄:၁။ ၈:၉) “မျှော်​လင့်​မထား​တဲ့ အချိန်​မှာ မျှော်​လင့်​မထား​တဲ့ ဖြစ်​ရပ်တွေ” ကြောင့် လူ​တွေ ဒုက္ခရောက်​တဲ့​အခါ​လည်း ရှိ​တယ်။ (ဒေ​သနာ ၉:၁၁) မရှိ​သင့်​တဲ့​အချိန်​မှာ မရှိ​သင့်​တဲ့​နေ​ရာ​ကို ရောက်​နေ​တဲ့​အတွက် မတော်​တ​ဆ​မှု​တွေ၊ အဖြစ်​ဆိုး​တွေ ကြုံရ​တတ်​တယ်။
၉။ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ​ကို ယေဟောဝါ ဖြစ်​ခွင့်​ပြု​ထား​တာ အကြောင်း​ကောင်း​ရှိ​လို့​ပဲ​ဆို​တာ ဘာ​ကြောင့် စိတ်​ချ​နိုင်​သလဲ။
၉ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ ဖြစ်​ပေါ်​အောင် ယေဟောဝါ ဘယ်​တော့​မှ မလုပ်​ဘူး။ စစ်​ပွဲ၊ ရာ​ဇ​ဝတ်​မှု၊ ဖိ​နှိပ်​မှု​တွေ​အတွက် ဘု​ရား​ကို အပြစ်​တင်​လို့​မရ​ဘူး။ င​လျင်၊ မုန်​တိုင်း၊ ရေ​ကြီး​တာ စ​တဲ့​ဘေး​ဆိုး​တွေ​ကို ဘု​ရား​သခင် ဖြစ်​ပေါ်​စေ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ ‘ယေဟောဝါ​ဟာ စ​ကြ​ဝ​ဠာ​မှာ တန်ခိုး​အကြီး​ဆုံး​ပု​ဂ္ဂိုလ်​ဆို​ရင် ဒီ​အဖြစ်​ဆိုး​တွေ​ကို ဘာ​ကြောင့် မတား​ပေး​တာ​လဲ’ ဆို​ပြီး သင်​တွေး​မိ​မှာ​ပဲ။ ဘု​ရား​သခင်​ဟာ ကျွန်​တော်​တို့​ကို အလွန်​ဂရု​စိုက်​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ​ကို ဖြစ်​ခွင့်​ပြု​ထား​တာ အကြောင်း​ကောင်း​ရှိ​မှာ​ပဲ။—၁ ယောဟန် ၄:၈။
၁၀။ ယေဟောဝါ​ကို စာ​တန် ဘယ်​လို​စွပ်​စွဲ​သလဲ။
၁၀ ဧ​ဒင်​ဥ​ယျာဉ်​မှာ အာ​ဒံ​နဲ့ ဧ​ဝ​ကို မာ​ရ်​နတ် လှည့်​စား​ခဲ့​တယ်။ ဘု​ရား​သခင်​ဟာ ဆိုး​သွမ်း​တဲ့​အုပ်​စိုး​ရှင်​ပဲ​ဆို​ပြီး စာ​တန် စွပ်​စွဲ​တယ်။ ဘု​ရား​သခင်​က အာ​ဒံ​နဲ့​ဧ​ဝ​ကို အကျိုး​ရှိ​မယ့်​အရာ​တစ်​ခု​ခု မပေး​ဘဲ ထိမ်​ချန်​ထား​တယ်​လို့ စာ​တန်​ပြော​တယ်။ သူ့​အုပ်​စိုး​မှု​က ယေဟောဝါ​ရဲ့ အုပ်​စိုး​မှု​ထက် ပို​ကောင်း​မယ်၊ ဘု​ရား​သခင်​ကို သူတို့ မလို​အပ်​ဘူး​လို့ ထင်​စေ​ချင်​တယ်။—ကမ္ဘာဦး ၃:၂-၅။ ရှင်း​လင်း​ချက် ၂၇ ကို​ကြည့်​ပါ။
၁၁။ ဘယ်​မေး​ခွန်း​ရဲ့ အဖြေကို သိ​ဖို့​လို​သလဲ။
၁၁ အာ​ဒံ​နဲ့ ဧ​ဝ​ဟာ ယေဟောဝါ​ကို မနာ​ခံ​ဘဲ ပုန်​ကန်​ခဲ့​ကြ​တယ်။ အမှား​အမှန်​ကို ကိုယ်​တိုင် ဆုံး​ဖြတ်​ပိုင်​ခွင့်​ရှိ​တယ်​လို့ ယူ​ဆ​ခဲ့​ကြ​တယ်။ သူတို့ အဲဒီ​လို​ယူ​ဆ​တာ မှား​မှန်း၊ ကျွန်​တော်​တို့​အတွက် ဘာ​အကောင်း​ဆုံး​လဲ​ဆို​တာ ယေဟောဝါ အသိ​ဆုံး​ဖြစ်​မှန်း ကိုယ်​တော် ဘယ်​လို သက်​သေထူ​ခဲ့​သလဲ။
၁၂၊ ၁၃။ (က) ပုန်​ကန်​သူ​တွေ​ကို ယေဟောဝါ ဘာ​လို့ ချက်​ချင်း မဖျက်​ဆီး​တာ​လဲ။ (ခ) စာ​တန်​ကို ဒီ​လော​က​ရဲ့ အုပ်​စိုး​ရှင်​အဖြစ် ယေဟောဝါ ဘာ​ကြောင့် ခွင့်​ပြု​တာ​လဲ၊ လူ​လူ​ချင်း​ကို ဘာ​ကြောင့် အုပ်​ချုပ်​ခွင့်​ပြု​တာ​လဲ။
၁၂ ယေဟောဝါ​က အာ​ဒံ​နဲ့ ဧ​ဝ​ကို ချက်​ချင်း ဖျက်​ဆီး​လိုက်​မယ့်​အစား သား​သမီး​တွေ မွေး​ဖွား​ခွင့်​ပြု​ခဲ့​တယ်။ အဲဒီ​နောက် ဘယ်​သူ့​အုပ်​ချုပ်​မှု​ကို လို​လား​တယ်​ဆို​တာ အာ​ဒံ​နဲ့ ဧ​ဝ​ရဲ့​သား​သမီး​တွေ​ကို ရွေး​ချယ်​ခွင့်​ပြု​ခဲ့​တယ်။ ယေဟောဝါ​ရဲ့ရည်​ရွယ်​ချက်​ဟာ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ပြည့်​ဝ​စုံလင်​တဲ့​လူ​တွေ​နဲ့ ပြည့်​စေ​ဖို့​ပဲ။ မာ​ရ်​နတ် ဘယ်​လောက်​ပဲ တား​ဆီး​ပါ​စေ ဘု​ရား​သခင့်ရည်​ရွယ်​ချက် ကျိန်း​သေပြည့်​စုံ​လာ​မယ်။—ကမ္ဘာဦး ၁:၂၈။ ဟေ​ရှာ​ယ ၅၅:၁၀၊ ၁၁။
၁၃ ယေဟောဝါ​ကို စာ​တန် စွပ်​စွဲ​ချိန်​မှာ ကောင်း​ကင်​တ​မန် သန်း​ပေါင်း​များ​စွာ ရှိ​နေ​တယ်။ (ယောဘ ၃၈:၇။ ဒံယေလ ၇:၁၀) ဒါ​ကြောင့် စာ​တန့်​စွပ်​စွဲ​ချက် မှန်​မမှန် သက်​သေထူ​ဖို့ ယေဟောဝါ အချိန်​ပေး​ခဲ့​တယ်။ ဒါ့​အပြင် ဘု​ရားရဲ့​အကူ​အညီ မပါ​ဘဲ စာ​တန့်​လက်​အောက်​မှာ လူ​လူ​ချင်း အောင်​မြင်​စွာ အုပ်​ချုပ်​နိုင်​မနိုင် သိ​ဖို့ အချိန်​ပေး​ခဲ့​တယ်။
၁၄။ အချိန်​ကြာလာ​တာ​နဲ့​အမျှ ဘာ​ထင်​ရှား​လာ​သလဲ။
၁၄ လူ​လူ​ချင်း အုပ်​စိုး​တာ နှစ်​ပေါင်း​ထောင်​ချီ​ကြာ​ခဲ့​ပေမဲ့ မအောင်​မြင်​ဘူး။ ဒါ​ကြောင့် စာ​တန်​ဟာ မု​သာ​ကောင်​ဖြစ်​မှန်း ထင်​ရှား​လာ​တယ်။ လူ​သား​တွေ​ဟာ ဘု​ရား​သခင့်​အကူ​အညီ မဖြစ်​မနေ​လို​အပ်​တယ်။ “ယေဟောဝါ​ဘု​ရား၊ လူ​ဟာ ကိုယ်​သွား​မယ့်​လမ်း​ကို လမ်း​ညွှန်​နိုင်​စွမ်း မရှိ​မှန်း ကျွန်​တော် ကောင်း​ကောင်း​သိ​ပါ​တယ်။ ကိုယ့်​ခြေ​လှမ်း​ကို လမ်း​ညွှန်​ပိုင်​ခွင့်​လည်း မရှိ​ပါ​ဘူး” ဆို​တဲ့ ပရော​ဖက်​ယေရမိ​ရဲ့​စကား သိပ်​မှန်​တယ်။—ယေ​ရ​မိ ၁၀:၂၃။
၁၅၊ ၁၆။ (က) ယေဟောဝါ​က ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ​ကို ဘာ​လို့ ဒီ​လောက်​ကြာ​ကြာ ဖြစ်​ခွင့်​ပြု​တာ​လဲ။ (ခ) စာ​တန်​ကြောင့်​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ ပြဿ​နာ​တွေ​ကို ယေဟောဝါ ဘာ​လို့ မဖြေရှင်း​ပေး​တာ​လဲ။
၁၅ ယေဟောဝါ​က ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခတွေ​ကို ဘာ​လို့ ဒီ​လောက်​ကြာ​ကြာ ဖြစ်​ခွင့်​ပြု​တာ​လဲ။ ဆိုး​သွမ်း​မှု​တွေ မဖြစ်​အောင် ဘာ​လို့ မတား​ဆီး​တာ​လဲ။ စာ​တန်​ရဲ့​အုပ်​ချုပ်​မှု မအောင်​မြင်​ဘူး​ဆို​တာ သက်​သေထူ​ဖို့ အချိန်​လို​တယ်။ လူ​တွေ​ဟာ အစိုး​ရ​အမျိုး​မျိုး ပြောင်း​လဲ​အုပ်​ချုပ်​ပေမဲ့ မအောင်​မြင်​ဘူး။ သိ​ပ္ပံ​ပညာ၊ နည်း​ပညာ​ပိုင်း​မှာ တိုး​တက်​လာ​ပေမဲ့ မတ​ရား​မှု၊ ဆင်း​ရဲ​နွမ်း​ပါး​မှု၊ ရာ​ဇ​ဝတ်​မှု၊ စစ်​မှု​တွေ အရင်​က​ထက် ပို​များ​လာ​တယ်။ ဘု​ရား​သခင့်​အကူ​အညီ မပါ​ဘဲ လူ​လူ​ချင်း အောင်​မြင်​စွာ မအုပ်​စိုး​နိုင်​ဘူး။
၁၆ ဒါ​ပေမဲ့ စာ​တန်​ကြောင့်​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ ပြဿ​နာ​တွေ​ကို ယေဟောဝါ မဖြေရှင်း​ပေး​ဘူး။ ဖြေရှင်း​ပေး​မယ်​ဆို​ရင် စာ​တန်​ရဲ့​အုပ်​ချုပ်​မှု​ကို ထောက်​ခံ​ရာရောက်​သွား​လိမ့်​မယ်။ ဒါ့​အပြင် လူ​လူ​ချင်း အောင်​မြင်​စွာ အုပ်​ချုပ်​နိုင်​တယ်​ဆို​တဲ့ စာ​တန်​ရဲ့​အဆို​ကို လူ​တွေ ယုံ​သွား​လိမ့်​မယ်။ တ​ကယ်​တော့ ဒါ​ဟာ အလိမ်​အညာ​တွေ​ပဲ။ အဲဒီ​အလိမ်​အညာ​တွေ​ကို လူ​တွေ ယုံ​သွား​အောင် ယေဟောဝါ ဘယ်​တော့​မှ လုပ်​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ဘု​ရား​သခင်​ဟာ ဘယ်​တော့​မှ မလိမ်​ညာ​ဘူး။—ဟီ​ဘ​ရူး ၆:၁၈။
၁၇၊ ၁၈။ စာ​တန်​ကြောင့် ဖြစ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ ထိ​ခိုက်​ပျက်​စီး​မှု​မှန်​သမျှ​ကို ယေဟောဝါ ဘာ​လုပ်​ပေး​မလဲ။
၁၇ စာ​တန်​နဲ့ လူ​တွေရဲ့ ပုန်​ကန်​မှု​ကြောင့် ဖြစ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ ထိ​ခိုက်​ပျက်​စီး​မှု​မှန်​သမျှ​ကို အကောင်း​အတိုင်း​ဖြစ်​အောင် ယေဟောဝါ လုပ်​ပေး​နိုင်​သလား။ လုပ်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဘု​ရား​သခင် မတတ်​နိုင်​တာ မရှိ​ဘူး။ စာ​တန့်​စွပ်​စွဲ​ချက်​တွေ​ကို ဘယ်​အချိန်​မှာ အကောင်း​ဆုံး ဖြေရှင်း​နိုင်​မလဲ​ဆို​တာ ယေဟောဝါ​သိ​တယ်။ ဒီ​ကမ္ဘာ​ကြီး​ကို န​ဂိုရည်​ရွယ်​ချက်​အတိုင်း ပရ​ဒိ​သု​ဖြစ်​အောင် လုပ်​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။ “သင်္ချိုင်း​ဂူ​တွေ​မှာ ရှိ​နေ​သူ​အားလုံး” ရှင်​ပြန်​ထ​မြောက်​လာ​ကြ​မယ်။ (ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉) လူ​တွေ ဖျား​နာ​တော့​မှာ၊ သေဆုံး​တော့​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ စာ​တန်​ဖြစ်​ပေါ်​စေ​တဲ့ ထိ​ခိုက်​ပျက်​စီး​မှု​မှန်​သမျှ​ကို အကောင်း​အတိုင်း​ဖြစ်​အောင် ယေရှု လုပ်​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ယေဟောဝါ​က ယေရှု​ကို​သုံး​ပြီး “မာ​ရ်​နတ်​လုပ်​သမျှ​ကို ချေ​ဖျက်” လိမ့်​မယ်။ (၁ ယောဟန် ၃:၈) လော​လော​ဆယ် ယေဟောဝါ​ရဲ့ စိတ်​ရှည်​မှု​ကြောင့် ကိုယ်​တော့်​ကို ကျွန်​တော်​တို့ သိ​ကျွမ်း​လာ​တယ်၊ ကျွန်​တော်​တို့​ရဲ့ အုပ်​စိုး​ရှင်​အဖြစ် ရွေး​ချယ်​ခွင့်​ရ​လာ​တယ်။ ဒါ​ဟာ ကျေး​ဇူး​တင်​စ​ရာ​ပါ​ပဲ။ (၂ ပေတရု ၃:၉၊ ၁၀ ကို​ဖတ်​ပါ။) ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​ကြုံရ​တဲ့​အခါ ကျွန်​တော်​တို့ ခံ​ရပ်​နိုင်​ဖို့ ဘု​ရား​သခင် ကူညီ​တယ်။—ယောဟန် ၄:၂၃။ ၁ ကော​ရိန္သု ၁၀:၁၃ ကို​ဖတ်​ပါ။
၁၈ ယေဟောဝါ​က သူ့​ကို အုပ်​စိုး​ရှင်​အဖြစ် ရွေး​ချယ်​ဖို့ အတင်း​အကျပ် မတောင်း​ဆို​ဘူး။ လူ​တွေ​ကို လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့် ပေး​ထား​တယ်။ ဒီ​အဖိုး​တန် ဆု​လက်​ဆောင်​ဟာ ကျွန်​တော်​တို့​အတွက် ဘာ​အဓိပ္ပာယ်​ရှိ​သလဲ​ဆို​တာ လေ့​လာ​ကြည့်​ရ​အောင်။
၁၉။ ယေဟောဝါ​က ကျွန်​တော်​တို့​ကို ဘယ်​ဆု​လက်​ဆောင် ပေး​ထား​သလဲ။ ဒီ​ဆု​လက်​ဆောင်​အတွက် ဘာ​ကြောင့် ကျေး​ဇူး​တင်​သင့်​သလဲ။
၁၉ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ဆို​တဲ့ ဆု​လက်​ဆောင်​ကို ယေဟောဝါ​ဆီ​က ကျွန်​တော်​တို့ ရ​ထား​တယ်။ ဒါ​ဟာ လူ​နဲ့ တိ​ရစ္ဆာန်ရဲ့ ကွာ​ခြား​ချက်​ပဲ။ တိ​ရစ္ဆာန်တွေ​ဟာ ပင်​ကို​အသိ​ဉာဏ်​နဲ့​ပဲ သွား​လာ​လှုပ်​ရှား​ကြ​တယ်။ ကျွန်​တော်​တို့​က​တော့ ဘယ်​လို​အသက်​တာ​မျိုး​နဲ့ အသက်​ရှင်​ချင်​သလဲ ရွေး​ချယ်​နိုင်​တယ်။ ယေဟောဝါ​ရဲ့ နှစ်​သက်​မှု​ကို ရ​ချင်​သလား၊ မရ​ချင်​ဘူး​လား ဆုံး​ဖြတ်​နိုင်​တယ်။ (ပညာ​အလိမ္မာ ၃၀:၂၄) ကျွန်​တော်​တို့​ဟာ ခိုင်း​တာ​ကို​ပဲ လုပ်​တတ်​တဲ့ စက်​ရုပ်​တွေ​နဲ့ မတူ​ဘူး။ ဘယ်​လို​လူ​စား​မျိုး ဖြစ်​ချင်​တယ်၊ ဘယ်​သူ​နဲ့ မိတ်ဆွေ​ဖွဲ့​ချင်​တယ်၊ ဘယ်​လို အသက်​ရှင်​နေ​ထိုင်​ချင်​တယ်​ဆို​တာ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ရှိ​တယ်။ ယေဟောဝါ​က ကျွန်​တော်​တို့​ကို ပျော်​စ​ရာ​ကောင်း​တဲ့ အသက်​တာ ရ​စေ​ချင်​တယ်။
၂၀၊ ၂၁။ အခု​အချိန်​မှာ သင် ရွေး​ချယ်​နိုင်​တဲ့ အကောင်း​ဆုံး​အရာ​ဟာ ဘာ​လဲ။
၂၀ ယေဟောဝါ​က သူ့​ကို ချစ်​စေ​ချင်​တယ်။ (မဿဲ ၂၂:၃၇၊ ၃၈) က​လေး​တစ်​ယောက်​က ခိုင်း​လို့​မဟုတ်​ဘဲ ရင်​ထဲ​က​နေ “အဖေ့​ကို ချစ်​တယ်” လို့​ပြော​တာ​ကို ကြား​တဲ့​အခါ ဖခင် ပျော်​သွား​တယ်။ ယေဟောဝါ​လည်း အဲဒီ​လို​ပါ​ပဲ။ မိမိ​ကို ဝတ်​ပြု​မယ်၊ ဝတ်​မပြု​ဘူး​ဆို​တာ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့် ကျွန်​တော်​တို့​ကို ပေး​ထား​တယ်။ စာ​တန်၊ အာ​ဒံ​နဲ့ ဧ​ဝ​တို့​က​တော့ ယေဟောဝါ​ကို ငြင်း​ပယ်​ခဲ့​ကြ​တယ်။ သင်​ကော လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ကို ဘယ်​လို​သုံး​မလဲ။
၂၁ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ကို သုံး​ပြီး ယေဟောဝါ​ကို ဝတ်​ပြု​ပါ။ ဘု​ရားရဲ့​နှစ်​သက်​မှု​ရ​ဖို့၊ စာ​တန်​ကို ငြင်း​ပယ်​ဖို့ ရွေး​ချယ်​ခဲ့​သူ သန်း​နဲ့​ချီ​ရှိ​တယ်။ (ပညာ​အလိမ္မာ ၂၇:၁၁) ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​မှန်​သမျှ မရှိ​တော့​မယ့် ကမ္ဘာ​သစ်​မှာ နေ​ထိုင်​နိုင်​အောင် အခု သင် ဘာ​လုပ်​ရ​မလဲ။ ဒီ​မေး​ခွန်း​ကို နောက်​အခန်း​မှာ အဖြေပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။
အမှန်​တ​ရား ၁။ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​ကို ယေဟောဝါ ဖြစ်​ပေါ်​စေ​တာ မဟုတ်​ဘူး
“စစ်​မှန်​တဲ့​ဘု​ရား​သခင်​က ဆိုး​ညစ်​တာ​ကို ဘယ်​တော့​မှ မလုပ်​ဘူး။ အနန္တ​တန်ခိုး​ရှင်​က မကောင်း​တာ​ကို လုံး​ဝ​မလုပ်​ဘူး။”—ယောဘ ၃၄:၁၀
ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​များ​ရ​တာ​လဲ။
၁ ယောဟန် ၅:၁၉
ဒီ​လော​က​ရဲ့​အုပ်​စိုး​ရှင်​ဟာ စာ​တန် ​မာ​ရ်​နတ် ဖြစ်​တယ်။
လူ​လူ​ချင်း ဒုက္ခရောက်​အောင် လုပ်​ကြ​တယ်။
မရှိ​သင့်​တဲ့​အချိန်​မှာ မရှိ​သင့်​တဲ့​နေ​ရာ​ကို ရောက်​နေ​တဲ့​အတွက် လူ​တွေ ဒုက္ခရောက်​တတ်​ကြ​တယ်။
ယေဟောဝါ​ဟာ လူ​တွေ​ကို သိပ်​ချစ်​တယ်။ လူ​တွေ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခရောက်​တာ​ကို မမြင်​ချင်​ဘူး။
အမှန်​တ​ရား ၂။ ယေဟောဝါ​ရဲ့ အုပ်​ချုပ်​ပိုင်​ခွင့်​ကို စာ​တန် စော​ဒ​က​တက်​တယ်
“မျက်​စိ​ပွင့် လာ​မယ်၊ အကောင်း​အဆိုး​ကို သိ​လာ​ပြီး ဘု​ရား​လို ဖြစ်​လာ​မယ်​ဆို​တာ ဘု​ရား​သခင်​သိ​တယ်။”—ကမ္ဘာဦး ၃:၅
စာ​တန် စော​ဒ​က​တက်​တာ​ကို ယေဟောဝါ ဘာ​ကြောင့် လျစ်​လျူ​မရှု​လိုက်​တာ​လဲ။
ဘု​ရား​သခင်​ဟာ ဆိုး​ညစ်​တဲ့​အုပ်​စိုး​ရှင်​ပဲ ​ဆို​ပြီး စာ​တန် စွပ်​စွဲ​တယ်။ အမှား​အမှန်​ကို ကိုယ်​တိုင်​ဆုံး​ဖြတ်​ပိုင်​ခွင့် ရှိ​တယ်​လို့ လူ​တွေ​ကို ယူ​ဆ​စေ​ချင်​တယ်။
ယေဟောဝါ​ကို စာ​တန် စွပ်​စွဲ​ချိန်မှာ ကောင်း​ကင်​တ​မန်​သန်း​ပေါင်း​များ​စွာ ရှိ​နေ​တယ်။
အမှန်​တ​ရား ၃။ စာ​တန်​ရဲ့ စွပ်​စွဲ​ချက် မှား​တယ်
‘လူ​ဟာ ကိုယ့်​ခြေ​လှမ်း​ကို လမ်း​ညွှန်​ပိုင်​ခွင့် မရှိ​ပါ​ဘူး။’—ယေ​ရ​မိ ၁၀:၂၃
လူ​တွေ ဘာ​လို့ ဒီ​လောက်​ကြာ​ကြာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ ရောက်​နေ​ရ​တာ​လဲ။
လူ​တွေ​ဟာ အစိုး​ရ​အမျိုး​မျိုး ပြောင်း​လဲ​အုပ်​စိုး​ခဲ့​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​အကူ​အညီ မပါ​ဘဲ ကမ္ဘာ​ကို အောင်​မြင်​စွာ မအုပ်​စိုး​နိုင်​ဘူး။
၂ ပေတရု ၃:၉၊ ၁၀
ယေဟောဝါ​ဟာ စိတ်​ရှည်​တယ်။ ကျွန်​တော်​တို့ သူ့​ကို သိ​ကျွမ်း​လာ​ဖို့၊ အုပ်​စိုး​ရှင်​အဖြစ် ရွေး​ချယ်​ဖို့ အချိန်​ပေး​တယ်။
၁ ယောဟန် ၃:၈
ယေဟောဝါ​က စာ​တန်​ကြောင့် ဖြစ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ ထိ​ခိုက်​ပျက်​စီး​မှု​မှန်​သမျှ​ကို အကောင်း​အတိုင်း ဖြစ်​အောင် ယေရှု​ကတစ်ဆင့် လုပ်​ပေး​မယ်။
အမှန်​တ​ရား ၄။ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ကို သုံး​ပြီး ယေဟောဝါ​ကို ဝတ်​ပြု​ပါ
“ငါ့​သား၊ ဉာဏ်​ပညာ​ရှိ​ပါ။ . . . ဒါ​မှ ငါ့​ကို ကဲ့​ရဲ့​နေ​တဲ့​သူ​ကို ငါ​ချေ​ပနိုင်​မယ်။”—ပညာ​အလိမ္မာ ၂၇:၁၁
ယေဟောဝါ​ဟာ မိမိ​ကို​ဝတ်​ပြု​ဖို့ ဘာ​ကြောင့် အတင်း​အကျပ် မတောင်း​ဆို​သလဲ။
တိ​ရစ္ဆာန်တွေ​ဟာ ပင်​ကိုယ်​အသိ​ဉာဏ်​နဲ့​ပဲ သွား​လာ​လှုပ်​ရှား​ကြ​တယ်။ ကျွန်​တော်​တို့​ကို​တော့ လွတ်​လပ်​စွာ ရွေး​ချယ်​ပိုင်​ခွင့် ယေဟောဝါ ပေး​ထား​တဲ့​အတွက် ဘု​ရား​ကို ဝတ်​ပြု​မယ်၊ မဝတ်​ပြု​ဘူး​ဆို​တာ ကိုယ်​တိုင် ဆုံး​ဖြတ်​နိုင်​တယ်။
မဿဲ ၂၂:၃၇၊ ၃၈
ယေဟောဝါ​ဟာ သူ့​ကို​ချစ်​လို့ ဝတ်​ပြု​တာ​ကို​ပဲ လို​လား​တယ်။